Yini imibono akuzona kuphela kithi ngamaphupho. Ngokwesibonelo, isithombe. Dream ncwadi ongamtshela okuningi ngalokho okushiwo ukuba umbono yalolu hlobo. Futhi njengoba i sihloko ezithakazelisayo, kufanele inikezwe ukunakwa.
mhlawumbe Lena yincwadi iphupho ethandwa kakhulu. Umdwebo owawungumnyaka embonweni indoda uxwayisa ngokuthi esikhathini esizayo esiseduze naye kungenzeka enkingeni noma ukudukiswa yilabo Wathembela.
Bheka wena ukudweba amafutha on ngendwangu, - ukubamba iqhaza ibhizinisi okuyingozi futhi akuqinisekile. Uma into enjengale sihlelelwe ngempela, kungcono ukuba ayiyeke le umqondo. Akukuhle futhi iphupho lapho umuntu ngandlela-thile ezilimele isithombe. Cishe, kuyodingeka basebenze kanzima ukuze avikele amalungelo abo.
Kodwa kukhona incazelo enhle enikeza incwadi iphupho. Painting of indoda wabona isithombe sakhe, ibhecwe izinga okusezingeni eliphezulu, uthembisa ukuchuma nokwaneliseka. Uma isithombe akathandi, yena oyodumazeka ukulahlekelwa kobungane nobudlelwane nokuqonda abantu bomdabu.
Ngokuvakashela igalari uthembisa ukungezwani. Ukuze usungule ubuhlobo bethu nabanye, kuyodingeka banethonya eziningi umzamo. Futhi zonke ngoba umphefumulo wayo ophuphayo sifuna nabanye abantu. Uma umuntu ebona yena sizungezwe mikhondo engcono amakhosi ubudala ngalesosikhathi he ngibeleselwa umqondo ukufinyelela abanye impumelelo Amazing. Musa uthole kakhulu ivalile kule, ngoba uma uke yokugcizelela ibha ngokwayo, luyakwazi ayeke ukuba sikuthathe njengokungathi sína wokunqoba kwawo, ngisho lawo okunenjongo ngempela.
Incwadi nekuhumusha wezifo omkhulu futhi sichaza okushiwo okwakukhona isithombe iphupho. incwadi Dream uthi: Lo mbono limelela wesifazane. Kodwa incazelo yayo eqondile incike ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ngokwesibonelo, umdwebo esikhulu limelela besifazane omdala. A amancane, ngokulandelana, intombazane esencane.
Isithombe esikhulu lizungezwe eziningana uphawu encane umama namadodakazi akhe. Futhi uma umbono iphupho indoda, futhi wayebheka isikhathi eside ucabangela isithombe, ngakho-ke ivame ukuba walala nowesifazane othile. Lapho ezama ukuntshontsha Umdwebo, kumelela isifiso sakhe ukufeza umgomo oyifunayo ngakulahla nganoma iyiphi indlela.
Le ntombazane nombono ubhekisela nezici ezithile kuye koxhumana nabo nabanye abameleli isigamu fair lesintu.
Kodwa uma lowo mphuphi walelo, kungakhathaliseki ubulili, baphanga isithombe (abasephula, ngomlilo, waphula uzimele), ngakho empeleni avame ngiwunqamule ubudlelwane nomlingani wakho.
I jikelele incwadi Izincazelo
Libuye ncwadi ngempela ezithakazelisayo iphupho. Isithombe ebodeni ngokuvamile kufanekisela ukumelwa ephelele yengxoxo futhi lula konke ezungeze ophuphayo. Noma ngabe impilo kubantu noma umsebenzi. Le mibono basikisela ukuthi abantu bavame idealize. Uma kungenjalo, khona-ke cishe, othile kubantu abaseduze naye uthanda bahlobise ngokoqobo. Ophuphayo engena iphutha. Ngokuvamile, uma esikhathini esizayo esiseduze ehleliwe akwenzele umsebenzi othile obalulekile, kungcono ukususa izibuko rose-ezinemibala, ithemba the best futhi soberly ukuhlola isimo ke ukugwema ukuphoxeka.
Umdwebo kuthé ongaziwa, igumbi ongaziwa? Lokhu uthembisa ukukopela kwezamabhizinisi noma ibhizinisi izithakazelo. Man kubhekwe imisebenzi yobuciko in ihholo lombukiso? Kuyinto izinkinga noma izinkinga ezithinta umkhaya. Kodwa uma umuntu uyakwazi ukubona owaziwa, ukucinga indikimba yendaba kalula ephusheni lakho, khona-ke ukubika abanye ivangeli. Noma empilweni kwenzeke funny izinkumbulo. Into esemqoka ukuthi kwaba yasekuqaleni, hhayi ikhophi noma ukukhiqizwa kabusha. Ngempela, nombono onjalo uthembisa ukulahlekelwa othandekayo.
Kodwa akugcini lapho lokho kubonisani ncwadi iphupho. Isithombe ohlakeni, okuyinto abantu wathenga, kuyinto kuzalwa ubungane ezimbili abami futhi abakhohlisayo abanamafundululu. Esikhathini esizayo esiseduze akufanele nginethemba kakhulu, ovulekile futhi ikakhulukazi tie ubuhlobo obuseduze nomuntu engajwayelekile.
Incwadi ukuhumusha ngekhulu xxi
Okuthile ezithakazelisayo Ungamtshela, futhi le ncwadi iphupho. Penda isithombe ngokoqobo, hhayi bonke. Kodwa iphupho - ngokuphelele. Uma umuntu ebona yena risuyuschim okumangalisayo futhi emuhle, ngakho empeleni ngaphezulu ophuphayo futhi wemibono. Mhlawumbe ubasa izinhlelo inkulu kakhulu futhi impracticable. Futhi kwakungeke ubuhlungu ukuba abe okungenzeka.
Uma umuntu ephawula ukuthi kutholakala eziningi ezinemibala egqamile futhi abacebile babekhalakathisela izinhlamvu esetshenziswa indalo yayo, it emelela ukukhathala yakhe kusukela monotony zokuphila kwansuku zonke. Sidinga esiphuthumayo "kabusha". Ngeke ubuhlungu ukuthatha iholidi noma ngokungabikho izinsukwana ukuba alulaze ukuphila kwalabo nge imibala bhá. Uma iholidi wena esikhathini esizayo esiseduze is kuhlelwe, kufanele okungenani uthole wokuzilibazisa entsha.
Kwadingeka ukupenda portrait kothile, ngisho ephethwe ukubona oye waba imodeli? Ngakho, nalowo muntu ukuba kuchazwe. Dreamer ngesineke landscape? Ngokushesha yena uyokwenza ishibhile. Ukuphila namanje kubonisani ukuthandwa. Into esemqoka ukuthi lowo mphuphi walelo wayiyeka isithonjana. Njengoba lo mbono ubikezela uvivinyo olunzima ezinzima futhi zokuphila.
By endleleni, uma umuntu ebona isithombe lapho wayechazwa caricature sakhe in the indima abaholayo, kusho ukuthi ekuphileni kwangempela kuyoba kuncike nokuyidlalisa ezivela kubangani.
Incwadi ukutolika Mage mhlophe
Uma indoda akhanga iphupho, khona-ke, cishe, ekuphileni kwangempela ethanda yobumfihlo yokuchitha isizungu convivial. Ngenxa akakuthandanga ayisaphazanyiswa imizwa yakhe, imicabango kanye nengqondo. Nature lowo mphuphi walelo cishe besemaphusheni futhi izwele. Kodwa kungcono ukuba nobuhlobo - friendly, siqu, noma okungenani izincwadi. Ngenxa kwelinye mzuzu bangaba isidina nokutholakala Ungamlimazi umngane omuhle.
Kodwa bheka ukuthi umuntu yokudweba enye - umona. Umuntu osuka imvelo esekuficile umuntu enza kahle kakhulu. Futhi umphumela kubangcono, elungile ngaphezulu futhi emuhle. Kodwa umona akulona ikhambi best. Umuntu ethungatha impumelelo yabanye, sikhohlwa okungamaphesenti angu-ukuphila kwakhe. Iyokwenza kahle ukuba sijabule abantu futhi unakekele yena. Futhi okubaluleke nakakhulu, kumelwe siqonde ukuthi zonke abakwazi ukuphila ngendlela efanayo. Wonke umuntu - indlela yakhe.
Uma lowo mphuphi walelo uyaqaphela ukuthi is posing ngoba ungumculi, kusho ukuthi engqondweni yakhe kukhona imizwa eziningi kakhulu nemizwelo. Futhi sekuyisikhathi okuthile (noma othile) bona ukusaphaza.
By endleleni, uma umuntu othile uthanda, ebona-ke njengoba naye ekuphileni, kuthi kungazelelwe Bengiphupha umdwebo omuhle ohlakeni esindayo, okusho ukuthi isethulo layo yalesi ubuntu akayena ngempela kuyiqiniso. Akunakwenzeka ukuthi engxenyeni yesibili ngobuqotho. Ngisho noma kubonakala sengathi ubuhlobo enhle. Ngokuvamile, incwadi iphupho weluleka ngaphansi bathembane futhi zama ukulandelela izisusa kothandekayo izenzo eyodwa.
Impela kuyinto efana "isithombe". Dream incazelo anganika incazelo enembile kuphela umbono, imininingwane ngimuphi ngokucacile uyakhumbula. Njengoba umkhuba ubonisa, abantu ngokuvamile baphupha izimbali ngesineke. ukutolika Universal ncwadi ithi: lena ngijwayele nendoda ekahle. Yena uyoba umphuphi akuyona kuphela ezithakazelisayo ukukhuluma, kodwa futhi umngane onokwethenjelwa.
Isithombe esakaza isihlahla ne izimbali ezikhula kuso kubonisani inzuzo yezezimali. Mhlawumbe-ke uzobe kokuwina iLotto, nice isipho, ifa noma ibhonasi. Nokho, ngaphambi kokuba uqale ukuchitha imali, kungcono ucabangisise izindleko.
Lokho bonke, okushiwo imibala imidwebo. Dream ukuhumusha Medea uthi: they were enkulu futhi egqamile umbala obomvu, ke ezokwenzeka maduze kubantu romance umuntu ngesivunguvungu, okuyinto sibheke phansi ukuchitha ukuphila okunethezekile. Kodwa lokhu akuyona into embi. Mhlawumbe Shake-up okunjalo futhi lowo mphuphi walelo akwanele.
Kodwa uma imibala esithombeni ayeyizidalwa yokufakelwa, kubalulekile ukuba balungiselele ukudumazeka ukwehluleka nokwethenjelwa. red roses umemezele romance kukhona othandana naye, peonies - okwenza phestri. A imbali ebhodweni ngokuvamile ithembisa injabulo emshadweni futhi ezinhle, ubudlelwane nobungane umndeni.
Ngokuvamile abantu beza imibono izithombe ezinjalo. Dream incazelo kuyinto izinto eziningi ezithakazelisayo ukukhuluma mayelana ekumeni. Uma umuntu abone isithombe owesifazane omuhle Kuyamangalisa ejabulela amahle ekuphileni kwangempela, kumelwe kukhunjulwe njengoba.
Njengoba isibonelo sokuba portrait uvele umphuphi ajwayelekile? Ngakho, empeleni, ukulala ngaye umbono okungewona. Ajwayelekile akukhona lokho kubonakala (futhi lokhu kungaba kokubili umuzwa ezinhle nezimbi izwi). Kodwa uma kwadingeka ukubona isithombe sakhe siqu, kusho ukuthi isikhathi ukuba uzazi kahle.
By the way, iphupho nencazo Ivanova uhumusha ehlukile lo mbono. Uthi empilweni yangempela, umuntu kuyodingeka wahlaselwa ngemilingo noma ukonakala. Dreamer wakuphawula indlela adonsela ngayo umculi, futhi kuvela ukuthi unesikhathi kuhle? Ngakho, isifiso sabantu ukuba abe umholi kwenza ngokucacile umqondo. Kufanele siragele phambili isinyathelo, futhi impumelelo kuyoba isiseduze.
Into esemqoka ukuthi portrait akezi ukuphila. Kungenjalo-ke kuyadingeka ukuba balungiselele Kanti neqiniso lokuthi umuntu kusukela umndeni uyagula. Futhi kungcono ukuze bazame ukuvimbela futhi zizodingida isiprofetho esiphathelene nencazo nezingokwenyama zomkhaya wakhe.
Kwenzeka ukuthi ekumeni of iphupho ntu okwadingeka abhekane nabo enye ingxenye yabo iya lomshado. Futhi ngesisekelo nakho kwabo kukhona izithombe yabathandekayo babo. Kungase futhi ukuchaza ncwadi iphupho. Isithombe njengesipho, oluveza umuntu esimthandayo ingubo yomshado (noma umkhwenyana noma umakoti), uxwayisa ngezinkinga ngaphambi isithembiso. Nokho, into esemqoka ukuthi lowo mphuphi walelo akababhubhisanga okuqondile. Ngoba uthembisa hlupheka yokwehlukana.
incwadi iphupho IsiZulu: upende ngemibala
Imidwebo zazingcono kakhulu abantu bonke wabhala e emifanekiso? Lena - isifiso shí fantasies babo obuyimfihlo kakhulu. Indoda ngakho sengathi izwe lakhe oqanjiwe ukuthi ukulungele baphile. Kodwa eqinisweni, ungesabi ukuzama ukuhumusha sisakha ibe yinto engokoqobo. Ngesikhathi umphuphi has zonke amathuba ukuze ujike ibe real oyifunayo.
Kodwa akugcini lapho esitshela incwadi iphupho. Umdwebi linikeza isithombe lemifanekiso, bese ayithengise kunendoda? Kuyinto - sizinze. Uma lowo mphuphi walelo ngokwakhe ukudalile, ngesineke, upende ezifuywa, ngakho konke odinga ngoba ukuthula nokuchuma, maduze nje kakhulu. Kodwa kuhlangana imibala ehlukene phakathi gouaches uthembisa yokuntuleka ukuzinza.
Kodwa kahle wachaza ngombono lapho abantu wasebenza Umdwebo ipensela. Kuyinto - ukuze inhlalakahle yomndeni kanye ushintsho okuhle. Uma umsizi ngesikhathi esifanayo okwengeziwe futhi iloliwe, futhi alimeli impumelelo nokuchuma. Akukhona nje endleleni esisebenzelana ngayo nabantu, kodwa nasemsebenzini.
Umbono lapho isihloko livela kakhulu ukuchaza ncwadi iphupho. Umdwebo eyayikhanga abantu kuqala, bese wanquma ufaka bayifaka Uhlaka, kodwa alibange ngobukhulu (noma ephukile), uthi okuthile okuthakazelisayo. Cishe, umuntu ubhekwa umngane umphuphi, kwakungeke oluthembekayo ukwesekwa, kanye fixers evamile. Ngamunye wafunda ehlushwa, futhi lokhu kwenzeka.
Akukona konke ekutshela incwadi iphupho jikelele. Dvweba sitfombe, bese uyifaka ngokuqinile ku ifreyimu - wokusebenzisa imizamo enkulu ngokoqobo. Mhlawumbe-ke kuhlelwe noma umcimbi ibhizinisi ebalulekile. Futhi ngakho konke kwahamba njengoba kufanele, umuntu kuyodingeka ukuzama.
Rama esenamandla futhi ngamandla? Ngakho, inhlalakahle ka ophuphayo, akazange avumele lutho ukuba kuntengantengise. Rama waphula? Kufanele ukulungiselela lo umonakalo, ukulahlekelwa noma ukuhlala ngokwahlukana.
Uhlaka amahle ezibaziweyo ezenziwe ngokhuni ezibizayo, uthembisa ikusasa elilondekile futhi lichume. Indoda iyeke ukubala imali futhi ungakwazi ukuthenga noma yini afuna. Kumagebhugebhu, kodwa uqweqwe ezimangelengele ezibukeka Uhlaka, futhi, esiyibika inhlalakahle, kodwa engeke abe Finesse, okuyinto ngakho efana uhlobo Izikhathi zokubonisana uthando njengendoda ophuphayo.
Kunezindlela eziningi imibono ezithakazelisayo, maphakathi ngesakhiwo kulo abakhonza izithombe. Olungavamile kunazo zonke kubo ekugcineni, kuyafaneleka ukunakwa. Futhi sibachazela futhi ukusiza Dream Miller.
Umdwebo oluveza ofileyo, umemezela nosizo olungokomoya lonkhe lusito labaludzingako wezimali kusuka izihlobo. Uma lowo mphuphi walelo wabona isithombe nomuntu ongaziwa ekuphileni kwakhe kuvela ozokwenza ukumhlenga. Kuyinto ezingalindelekile futhi siluhlanganyele.
Uma umbono kungazelelwe yavela isithombe sezombusazwe, kufanele kwaphoqa emphilweni ukucindezeleka futhi kungenazo izingxabano. Umsubathi wayechazwa esithombeni? Uyobe wenza kahle uma ukuqinisa impilo yabo. Kodwa portrait umndeni ubikezela elichumayo kwesikhathi sokuphila.
Uma umuntu wanikeza umuntu isithombe, ungene ngemvume umbhalo wesandla sakhe, akufanele ulinde ezinhle. Ngokuvamile, nombono onjalo kuyinto kuzalwa enkingeni. By endleleni, uma umuntu uyaphakama manje ke empeleni uyobhekana yokwesaba. Kungcono ukuthumela iphupho ohlangothini oluhlukile. Futhi ungayishisi isithombe bese sinqume. Lo mbono kufanekisela ukuvikelwa enkingeni.
Ngokuvamile, njengoba ungabona, kukhona ukutolika eziningi, futhi sithembele nenqwaba umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ahlukene. ukuthatha kuphela kubo ku-akhawunti, kungenzeka ukunikeza incazelo eqondile sombono.
Kungani iphupho labantu udakiwe? Dream ncwadi sizophendula lo mbuzo!
Dream ncwadi. Yini iphupho ngiphuphe isandla indoda?
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha ithanga?
Dream ncwadi. Kungani iphupho indandatho yomshado?
Ephusheni, nokuhlanza: dream incazelo
Impetigo ezinganeni. Izimpawu kanye Ukwelashwa
Indlela ukuya "Imininingwane" ongabonakali, noma kanjani ukuba abe engabonakali abangane?
UDavid Anders: umsebenzi kanye ne-biography
Umdlali wasesiswini Latvian Aleksandr Cauna